Yintoni enokuyenza xa kukho i-thrush kwintsana ekhulelweyo, indlela yokunceda umntwana kule meko? Lo mbuzo uxhalabisa oomama abaninzi abaqaphele esi sifo kumntwana wabo. Ngoko ke, ukuba umntwana wakho ubhekene ne-thrush, le ncwadi iphela kuwe. Kulapha ukuba ukwazi ukuqonda ezi zizodwa zezi zifo, ukufumanisa kwayo, izizathu eziphambili zokuvela kwayo kunye nezindlela zokulwa nayo.
Ngaphambi kokuba sifunde oko kuyimfuneko ukuyenza nge-thrush kwintsana, indlela yokumnceda ukujamelana nale ngxaki, sinqume ukukwazi kangcono malunga nesi sifo.
Indlela yokuchonga xa usana luye lwasusa (candidiasis) ?
Akumangalisi, kodwa ukunyuka kwintsana kulula ukuchonga. Ukukufumanisa, kufuneka uhlolisise umlomo wengane. Ukuba ubona amabala amhlophe apho, ujikelezwe yi-reddening, eyasasazeka kwindawo yezinsini, ulwimi kunye nezihlunu, khumbula, ezi ziyimpawu zokuqala ezithi umntwana wakho uhlasele. Kwakhona, ngeli thuba, umntwana unzima kakhulu ukuncelisa ibhokhwe lomama. Ngokuqhelekileyo, abantwana banokuvumela ukuhamba kwebele ngexesha lokutya.
Imvubelo ebangela i-thrush, njengommiselo, ikhula kwindawo efudumalayo neyomhlaba, ngoko kwenzeka ukuba umntwana angabamba esi sifo kunina. Ngoko ke, ukuba unina utyhefu kwi-milkmaid, kukho konke amathuba okuba utshintshe kumntwana. Ngenxa yalesi sizathu, kungekhona nje kuphela, kodwa unina unelungelo lokunceda ukuphelisa esi sigulo.
Izinto eziphambili ezibangelwa i-thrush kwintsana .
Ukutshitshiswa, njengoko sithe satsho, kubangelwa iifungi ezithile ezisemzimbeni kwanoma yimuphi wethu. Enyanisweni, uphuhliso lwabo luhlala lugqitywa yizinto ezithile. Ukuba unina wayene-thrush ngexesha lokukhulelwa, ke kukho onke amathuba okucinga ukuba umntwana usulelekile ngexesha lokudlula kwinqanaba lokuzalwa. Kananjalo inkunzi iya kugula ngenxa yokuphulwa kwemithetho yobuthakathaka bendalo ngabazali bentsana. Ukongeza, i-thrush ibangelwa yizinto ezilandelayo: ukukhuseleka komzimba kwamanqatha (apha ungabandakanya abantwana abazalelwe ngaphambi kwexesha labo), ukugula okutshintshiswe kutshanje, okunciphisa imisebenzi yokukhusela, ukusetyenziswa kwezixhobo ezahlukeneyo zokulwa, ukutya okuncedisayo kunye nokuphindaphinda rhoqo umntwana. Esi sizathu esona sizathu sokuba esi sifo sikhule kwiintsana.
Iingcamango ezingalunganga malunga nesifo .
1. Ukutshatyalaza kunakho ukubonakala kuphela emlonyeni womntwana. Le fungus ingahlakulela kakuhle kwaye ibangele ukuvuvukala kwiintlobo zesikhumba kunye nezitho zangasese zomntwana, oko kukuthi i-mucosa yazo. Ngoko kuyimfuneko ukulwa nale sifo kwimpawu zokuqala zesifo.
2. Ama-antibiotics anokukhawulezisa inkqubo yokubuyisela. Kufuneka kuqatshelwe ukuba imbangela ebalulekileyo yesi sifo yi-fungus, kwaye ngokufanelekileyo kufuneka iphathwe ngama-antifungal agents. Kodwa zonke ezinye iziyobisi zingabangela ukuba isisombululo senzeke kwiimvumba.
3. Zelenka yonke intloko. Kwakuqhele ukuba yile ndlela, kodwa kungekhona ngoku, ngaphandle kwayo yonke le mayeza ayincede kuphela, kodwa igalela iimbumba zomlomo.
4. Ukuba ukutshabalalisa kwanyamalala - kubonisa ukuba umntwana ufumene kwakhona. Akunjalo nhlobo. Khumbula, ukuba i-thrush ingagqithwanga ngokupheleleyo, ngokuqinisekileyo iya kuphinda iqale. Ngoko siyeke ngokukhawuleza unyango, asiyincongo.
Thrush, indlela yokuncedisa i-crumb ukuyilahla ?
Okokuqala, kufuneka ucele ukubonisana nodokotela wezingane, ngubani omele akunike amachiza akhethekileyo kwaye akuxelele indlela onokunika ngayo umntwana wakho, kwaye ungakanani na omele ufumane inkqubo yokonyango.
Ukususela kwiindlela ezilungelelweyo, ukukunceda ngempumelelo umntwana ukuba abuyele kwi-candidiasis angenza i-aloe ijusi. Ukwenza oku, udinga ukuthatha iqabunga le ntyatyambo, kulungile ukuhlamba kunye nokukhipha ijusi kuyo. Emva koko, zama ukuqiniseka ukuba le juyisi iyindawo echaphazelekayo yi-milkwoman. Isisombululo se-baking soda sinceda. Ukwenza oku, udinga 1/2 indebe, ngamanzi abilisiwe, uchithe i-teaspoon eyodwa ye-soda. Emva koko kufuneka uhambise umlomo womntwana ngesisombululo esiphumela. Kodwa ukuze umlomo uvule umlomo wakhe, kufuneka ucinezele isithupha sakho kwisinqe sakhe ngesithupha sakho. Emva koko unokusula umlomo womntwana nge-swab ngesisombululo okanye i-aloe juice. Yenza le nkqubo, icetyiswa rhoqo iiyure eziyi-2-3.
Amaconsi aseNystatin yinye ikhambi elingawunqoba i-thrush. Emva kokutya umntwana, kufuneka uhlambulule umlomo wezinsalela zobisi. Oku kunokwenziwa ngokunika umntwana isiselo samanzi abilisiwe okanye esula umlomo wakhe ngetayiliti emanci. Emva koko thabatha i-cotton swab uze ubeke phezu kwayo amaconsi ayishumi esi siza. Emva koko, ngoncedo lwalo mqobo, sula umlomo womntwana. Yenza oku, kucetyiswa kathathu ngosuku, malunga neentsuku ezilishumi kumqolo.
Amanyathelo okukhusela i-thrush kwintsana .
Ngeendlela zokuthintela, kubalulekile ukuba usule umlomo womntwana ngesisombululo sesoda (iresiphi esichazwe ngasentla). Ukuba usondla umntwana wakho ngobisi lobugcisa, rhoqo emva kokutya, mnike ezimbini iibhepuni zamanzi abilisiwe. Oku kuya kunceda ukucoca umlenze womlomo womlomo. Jonga ucoceko lomntwana. Kwakhona, zama ukuvumela ukutshatyalaliswa rhoqo kwintsana. Gcina iingubo zentsana kwiindawo ezinobumba. Geza isifuba sakho nezandla ngaphambi kokuba uqale ukondla umntwana.
Ukuba umntwana uyagula nge-thrush, kufuneka ubilise zonke izinto ezikujikelezile. Yenza oku, kunconywa imizuzu engama-20, kwaye amanzi ayenzela ukufaka i-soda encinane okanye iviniga.
Kwimeko yesibisi somgubo kwindawo ye-diaper, kufuneka uhambe kule ndawo evulekile rhoqo kangako, ukuze iphefumula umoya. Ngendlela, ukusebenzisa kule meko, i-napkins ye-cosmetic ayinqatshelwe.
Kwaye ekugqibeleni, kufuneka sitsho ukuba unyango lwe-thrush yinkqubo ende kakhulu. Kodwa ukuba ulandela zonke iingcebiso ngokuchanekileyo, uya kuhlala ufumana umphumo omuhle. Khumbula ukuba impilo yengane yakho incike kuphela kuwe. Inhlanhla kuwe nakumntwana wakho!
Nguwuphi na ugonyamelo obaluleke kakhulu kumntwana
Ubuthongo obunempilo nobunempilo bomntwana
I-gymnastics yokuphefumula kubantwana
I-adenoiditis enobuchule kwaye engapheliyo kwaye unyango lwayo
Isibilini kwisitala sikaStroganov
Ukuxhomekeka kwiifowuni nakwiikhomputha
Imiqulu evela kwiphepha elonakalisiweyo yeeholide ka-Meyi 9: iiklasi zifundisa ngefoto kunye nevidiyo